Izixhobo - Global ARCH
Global ARCH / Resources
Iphepha leNyaniso yeSifo seNtliziyo ebuntwaneni
Isibhengezo samaLungelo kuBantu abaneSifo seNtliziyo esiQhuba ebuntwaneni.pdf
Ingxowa yezixhobo zokuxhasa
IsiShwankathelo sokuBhengezwa kwamaLungelo
Ilizwi loMntwana ongabonakaliyo: Isifo sentliziyo yaBantwana kunye ne-Ajenda yezeMpilo yeHlabathi (i-HeartLink yaBantwana)
Yintoni iRheumatic Fever kunye neRheumatic Heart Disease? (Fikelela)
Ingxelo yeNzululwazi yeAmerican Heart Association: Ukuchongwa okwangoku kunye noLawulo lweSifo seNtliziyo esiyiRheumatic: Iziphumo zokuvala umsantsa
Ityala loMntwana ongabonakaliyo: Isifo sentliziyo yaBantwana kunye ne-Ajenda yezeMpilo yeHlabathi
Ukufumana uMntwana ongabonakaliyo: Isifo sentliziyo yaBantwana kunye ne-Ajenda yezeMpilo yeHlabathi
Ukunyanga uMntwana ongabonakaliyo: Isifo sentliziyo yaBantwana kunye ne-Ajenda yezeMpilo yeHlabathi
Ilizwi loMntwana ongabonakaliyo: Isifo sentliziyo yaBantwana kunye ne-Ajenda yezeMpilo yeHlabathi
UBomi obuNgapha koCando: Ukujongana nomba ongahoywayo wokubonelela ngokhathalelo lwentliziyo lokuzala ixesha elide kumazwe anengeniso ephakathi
I-HeartChoir: Isifundo esinomdla esibonisa ukuba ukucula kwekwayala kuphucula amandla emisipha yokuphefumla kunye nomgangatho wobomi kwizigulana ezinesifo sentliziyo. Ipapashwe yiSwitzerland Medical Weekly kwiYunivesithi yaseBasel eSwitzerland.
Unyango lwezifo zentliziyo yesifo sokuzalwa esinezinto ezibonakalayo ezibonakalayo zoqhaqho lwentliziyo lwe-50. Isibonelelo esikhulu sabazali kunye nezigulana.
Izixhobo zoNyango lweNtliziyo